Ny Xiaomi Mi 4C dia haseho anio | Androidsis
Ny Xiaomi Mi 4C dia haseho anio
Xiaomi no mpanamboatra fitaovana finday lehibe indrindra any Shina. Ny terminal-n'izy ireo dia amidy tsara satria, ny orinasa aziatika, dia manitsy ny vidin'ny terminal-terminal araka izay tratra, mampiharihary ireo fitaovana mifaninana hafa. Nahita Xiaomi maro izahay nandritra ny fisian'ny bilaogy, saingy hatramin'izao dia mbola tsy nahita kinova kely an'ny sainan'ny orinasa ankehitriny izahay.
Ary hoy izahay hatreto fa hatramin'ny nanambaran'ny orinasa tao amin'ny seha-pifanakalozan-keviny ny daty hanolorana izay ho fitaovana avo lenta farany farany an'i Xiaomi, miresaka momba ny Xiaomi Mi 4C.
Xiaomi dia nitana an-tsokosoko ity terminal ity, na dia misy aza ny fampahalalana hafa amin'ny alàlan'ny fanivanana. Na izany aza, tsy hiandry ela isika satria hatolotry ny orinasa mandritra ny ora vitsivitsy. Ity terminal vaovao ity mety ho bestseller hafa ho an'ny orinasa sinoa nanomboka teo, dia hanana famaritana tsara amin'ny vidiny mirary tokoa izy io.
Raha mijery ny fikafika voalaza momba ny terminal manaraka isika, dia hitantsika hoe hanao ahoana, ny efijery novokarin'i Sharp 5 santimetatra eo ambanin'ny pikantsary 1080 x 1920 teboka, izay midika hoe hakitroky ny efijery 438. Raha miditra amin'ny tsinay ny terminal isika, dia hitantsika ny fomba hametrahany ny processeur enina ivotoerana 1,8 GHz ary novokarin'i Qualcomm, indrindra ny Xiaomi Mi 4C dia hipetraka, toa, ny Snapdragon 808. Ho fanampin'ity SoC ity dia hiaraka aminao izy ireo Fahatsiarovana RAM 2 GB miaraka amin'ny Adreno 418 ho an'ny sary. Ny fitehirizana anatiny dia 16 GB ary mety hivelatra amin'ny alàlan'ny slot microSD.
Raha manohy mijery fiasa manandanja hafa isika dia hitantsika fa, ao amin'ny fizarana misy azy, ny finday avo lenta sinoa dia hametraka fakan-tsary lehibe ary miorina eo ambadiky ny Xioami Mi 4C an'ny 13 Megapixels Ary, raha ny momba ny fakantsary eo aloha, dia ho 5 MP, izay tokony ho ampy hanaovana antso an-tsary sy / na selfie. Farany maneho hevitra fa, ny baterinao dia ho 3.000 Mah.
Ny refy dia manana refy 138,1 mm x 69,6 mm x 7,8 mm ary lanja 126 grama. Ity Xiaomi ity dia hihazakazaka eo ambanin'ilay kinova MIUI 7 izay, araka ny fantatrao tsara, dia miorina amin'ny kinova Android farany, Android 5.1 Lollipop. Hanana 4G sy USB-Type C. Mila miandry ora vitsivitsy fotsiny isika vao hahalala amin'ny fomba ofisialy hoe hanao ahoana ny fitaovana. Hihaino tsara ny zava-mitranga any amin'ny firenena Aziatika isika mba hahafahany manazava haingana araka izay vitantsika, izay rehetra ao amin'ny smartphone Xiaomi vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Ny Xiaomi Mi 4C dia haseho anio
Omate dia manolotra ny TrueSmart + azo ampiasaina vaovao izay miasa amin'ny Android 5.1 Lollipop
LG saika hamokatra be dia be ny fampiratiana azy